Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo sheegay In Awooda Ciidanka Shiinuhu Korodhay.
Maraykanka oo sheegay In Awooda Ciidanka Shiinuhu Korodhay.
Posted by ONA Admin	/ August 18, 2018
Warbixin ay soo saartay Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in duuliyeyaal dagaal oo Shiine ah loo tababarayo sida ay u duqayn lahaayeen deegaano fogfog sida dalka Maraykanka iyo wadamada xulufada la ah.
Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka waxa kale oo ay warbixintan ku sheegtay in Shiinaha ay mudo toban sanadood gudahood ah ugu suurto geli karto inuu samaysto gantaalaha ridada dheer ee qaada nukliyeerka.
Sidoo kale warbixintan ayaa lagu shaaciyay in ay sii kordheyso awooda Milatari ee dalka Shiinaha sida qarashka uu ku bixiyo Milatariga oo lagu qiyaasay lacag gaareysa $190bn (£150bn). Hase yeeshee dowlada Shiinaha ayaan illaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixin warbixintan laga soo saaray Pentagonka.
Maraykanka ayaa waxaa walwal ku haya saameynta sii kordheysa ee ay dowlada Shiinaha ku yeelanayso badda Pacifica oo hore Maraykanku uu awood dheeraad ah ku lahaa.